Xog: Kiiska ICJ Sidey Ingiriiska iyo Talyaaniga uga heshiiyeen xuduudda badda ee Soomaaliya iyo Kenya? | Dayniile.com
Home Warkii Xog: Kiiska ICJ Sidey Ingiriiska iyo Talyaaniga uga heshiiyeen xuduudda badda ee...
Xog: Kiiska ICJ Sidey Ingiriiska iyo Talyaaniga uga heshiiyeen xuduudda badda ee Soomaaliya iyo Kenya?
Maxkamadda Caalamiga ah ee Caddaaladda (ICJ) ayaa 15-ka bishan March billaabeysa dhageysiga dacwadda badda ee Soomaaliya iyo Kenya.
Muddo ka badan shan sano ayuu soo jiitamayay kiiska oo marxalado badan soo maray, caqabado xoog lehna soo wajahay, sida dib u dhacii uu sababay cudurka safmarka ah ee corona.
Hadal heynta ayaa maalmahan sii xoogeysaneysay maadaama uu soo dhawaaday waqdiga lagu dhawaaqayo xukunka kama dambeysta ah.
Waxyaabo badan ayay garsoorku eegi doonaan si ay hal dal ugu go’aamiyaan qaybaha lagu muransan yahay.
Xadkii Ingiriiska iyo Talyaaniga
Marka lasoo hadal qaado muranka xadka badda ee Soomaaliya iyo Kenya waxaa dad badan kusoo dhaca su’aal ku saabsan sababta marka horeba keentay in la is qabto.
Labada waddan waxaa gumeystay Ingiriiska iyo Talyaaniga, xadka dhulkana iyaga ayaa u sameeyay ka hor inta aysan ku wareejinin madaxbannaanidooda.
Gumeystayaasha ma go’aamiyeen xadka badda, maxayse ku qorsheeyeen?
Admiraal Faarax Axmed Cumar, oo loo yaqaanno Faarax Qaren, oo madax ka ah hay’adda cilmi baarista badaha Soomaaliyeed ayaa BBC-da u sharraxay qaabka uu ahaa heshiiskii Talyaaniga iyo Ingiriiska.
“Horta xuduuddaan Kenya iyo Soomaaliya ma wada dhiganin, Talyaani iyo Ingiriis baa wada dhigtay oo labada dhinac isticmaarsanayay. 25-kii July, 1924-kii ayay ku kala saxiixdeen London, sidaas ayuu Ingiriiska Talyaaniga ugu wareejiyay dhulka hadda loo yaqaanno Jubbaland.
“Xuduudda marka waa la calaamadeeyay, waxaa loo diray injineerro calaamadeeyay, 29 calaamad oo dhagax shub ah ayaa lagu calaamadeeyay. Kan 29-aad wuxuu taagan yahay xeebta badda Raas Kambooni koonfurkiisa ayuu taagan yahay.
“Markii dhulki la xadeeyay waxaa loo baahday xuduud badeed, waxay sharciga ku qoreen ‘xuduudda baddu waa xariiqin halka ay xuduudda dhulka kasoo gasha ka baxeysa oo taagan, oo toosan, oo badda u jeedda, oo jasiiradaha labo shaanka ah ee shanta ah dhinaca galbeed ka mareysa,”, ayuu yiri Faarax Qare oo marna ahaa taliyaha ciidamada badda ee Soomaaliya.
Qaabkan ayaa ah midka ay dowladda Soomaaliya ku doodeyso in loo cabiro xadka badda, iyadoo dacwadda ICJ-na sidaas ku saleysay, halka Kenya ay ku adkeysaneyso in xariiqinta dhanka kale oo leexiyo.
Fikraddii ay ku billaabatay gudbinta dacwadda badda
Dad badan waxba kama xasuustaan sida ay sheekada furitaanka dacwadda ku billaabatay markii ugu horreysay.
XIGASHADA SAWIRKA,ICJ/AMB. FOWZIA
Qoraalka sawirka,Fowziya Yuusuf Xaaji Aadan (midig) iyo Muna Sharmaani
dacwada, sidaasna kiiska loogu geeyay ICJ.
Qoraalka Codka,Xasan Sheekh oo ku dhaliilay dowladda Soomaaliya inay ka gaabisay dacwadda muranka badda
Jadwalka Dhageysiga dacwadda Kiiska Baddeena ee ay muranka galisay Kenya. pic.twitter.com/UluYc0xlMM
— Mahdi M. Gulaid (@KhadarGulaid) March 10, 2021
Dhowr bilood ka hor ayey garsoorka ICJ ku gacan seyreen dalab kale oo Kenya ay ku dooneysa dib u dhigista dacwadda, waxaana hadda loo ballan san yahay in dhageysiga uu furmo maalinta Isniinta ah ee isbuuca soo socda.
Previous articleKoox Hubeysan oo lagu Rasaaseeyey Galkacayo
Next articleDowladda Kenya oo ka hadashay inay ka qeybgaleyso dhageysiga dacwadda badda iyo inkale
Warbaahinta Waqooyiga Korea, ayaa hawada soo galiyey sawiro iyo video muujinaya askar ku jirta tababar, taasoo ay awood ahaan u muujinayaan ku jajabinta walxo...
Wasiirka Maaliyada Soomaaliya oo ka qeyb galay Shirka deyn cafinta Soomaaliya
Maraakiibta afka hore u dheer ee ku shaqeeya awoodda nukliyeerka, kuwaas...